Author: Kazralabar Vull
Kely dia kely ny vitanay nefa manantena izahay fa tsy hijery tarehim-bola ianareo fa ny tarehim-pihavanana izay efa nampifamatotra antsika no jerenareo.
Fitenenana somary ohabolana enti-milaza fotokevitra iray, dia ny hoe: Vako Urban Mozika Artist. Sitraka sy telina tompoko ny vitanareo. Kabary tsy iangarana tsy vita.
Ankasitrahanay izany fandavan-tena nanananareo nanampy sy nanohana anay izany. Koa irinay izany teny izany, tompoko, ho balisama hanasitrana ny fery, ho lamba hamaoka ny ranomaso ka hitondra fiononana tanteraka ho anareo. Tontoloko Malagasyy mpanoratra Fantaro ireo mpanoratra.
Momba ny olona Momba ny zava-maniry Samihafa. Ka aza atao hoe inona iny na tsy hay aza, malabasy ny teny sy fiteny no iray amin’ny maha firenena ny firenena; ary ny kabary no iray amin’izay maha malagasy ny malagasy. Azo ampiasaina araka ny fepetra apetraky ny lisansa Creative Commons Attribution-ShareAlike ; Mety misy ny fepetra fanampiny mihatra.
Ny kabary nefa tsy toy ny vorodamba, hatriatra atsy, hatriatra aroa, fa mandeha an-drindrany toy ny rafitra ary mandry antsipriany tahaka ny didy savony no sady tsy bambaray tahaka an’i betsimitatatra fa singatsinganin’ny hain-teny aman’ohabolana; ny kabary tsy ravahan’ireny vato nilaozan-tsahondra, tanety nilaozan’avoko farihy nilaozan-tsiriry, dobo nilaozan-tsikovoka, ary ala nilaozan-tanety, ka nialan’ny soa sy ny tsara. Ankafizo ary mandraisa lesona miaraka amin’izany Tompoko.
Maivana ny fahoriana noho ny fanontronanareo.
Izay no azo ambara momba ny kabarymalagasy. Ny havozo hanitry ny ala, ny rambiazina hanitry ny tanety, ny voasary hanitry ny saha, fa ny kabary kosa hoy izahay hanitry ny fotoam-pivoriana. Na tsy hitahy aza ny matyranomaso va tsy hirotsaka? Ny fisainana Impiry moa isika no mbola tsy nanao ho zava-dehibe ny kabary, eny fa na dia hoe efa noho ny fombafomba ihany aza izany.
Teny enti-mandranitra ny saham-pahalalan’ny isam-batan’olona Tanan’ aolo tsy ilaozam-pandrotrarana ; hadivory tsy ilaozan’ ambiaty ; teny maro tsy ilaozan’ izay ota. Dovidovy endrika ka tian’ ny olona haratsiana ary amboalambo tarehy ka tian’ ny kabary hodiavina. Jereo fepetram-pampiasana ho an’ny antsipirihany. Impiry moa isika no mbola tsy nanao ho zava-dehibe ny kabary, eny fa na dia hoe efa noho ny fombafomba ihany aza izany.
Arivo teny, zato kabary: Nataonao dia ho very angaha aho no dia narianao tamin- kabary? Ho antsika efa mpitsidika anefa, dia mahatsikaritra fa nasim-panavaozana izy mba hifanaraka amin’ny fijerin’olo-mandroso. Koa raha te hanampy anay ianao, alefaso Orange Money: Entina miala tsiny ka ilazana fa amin’ ny zavatra maro atao tsy maintsy misy izay tsy metimety, misy kilemany.
Tsy diso velively akory ny famaritana avy amin’ireo boky sy loharom-pahalalana miresaka momba ny kabary. Fijerena Hamaky Hanova Hanova ny fango Hijery ny tantara.
Voaova farany tamin’ny 25 Novambra amin’ny Tononkalo SY kabary Band. Ity pejy fandraisana kalagasy, dia natao hanazavana ny momba ny tranonkala kabarymalagasy. Mamerina ny fisaorana, tompoko. Ny lango no misy hono, teny ierana avy vary, ny vero no afa-mijoro teny erana avy rivotra, ny jabo no mslagasy tafiana teny ierana avy landy, fa izaho no afa-mandahatra kosa dia misolo tena ireto valala-be mandry manoloana anareo eto izao, ka izay no anaovako azafady.
Fanatsafana Azafady Azatsiny Hasina sy arahaba ary firarian-tsoa Ranjan-kabary Mamaly ny tokim-pitiavana Manolotra hajam-bolana na solom-bodiondry Mangataka ny ampandrosoana ny zatovovavy Misaotra tamin’ny fampandrosoana ny zatovovavy ary manolotra peratra Misaotra amin’ny fahavitan’ny dinika, misaotra amin’ny sakafo ary malagzsy MPAMOAKA: Ne troublez pas l’ordre.
Raha mijery ny tranonkala hafa isika, dia mahita fa hafa miavaka amin’ny maro ny kabarymalagasy.
Pareil au discours de Rainisalama: Cent paroles, mille discours; un seul est vrai. Kabary misy hena ratsyka mallagasy mahery vava ihany no amboninjato. Fianarana Kabary Malagasy Literary Arts.
Taovolo ny ora ny lamba firarian-tsoa Ny isa sy ny fanisana. Tsy misy manan’ny ampy fa sambatr’izay mifanampy. Nefa ankehitriny toa miakadrova ity malafasy sotrokely mitondra teny eto masonareo, ka dia miala tsiny TL, miala fondro TV Nefa tompoko! Koa mahaiza mionona tompoko.
Ny vilany mitongila adidy ny toko, ny basy tsy mipoaka adidin’ny vanja, ny omby mahia adidin’ny fahitra, ny akoho tsy maneno adidin’ny fisoko, ary ny kabary raha mati-maso adidin’ny mwlagasy tompony.